Taunggyi Time (တောင်ကြီးတိုင်းမ်): အရှုပ်အထွေးများနှင့် ရှမ်းပြည်နယ်
ကျနော်က ရှမ်းပြည်မှာမွေးတဲ့ ရှမ်းပြည်သားတစ်ယောက်မို့ ရှမ်းပြည်ရဲ့အရေးအရာကိစ္စတွေနှင့် သမိုင်း တွေကို ကျနော်နိုင်ငံရေးမလုပ်သည့်တိုင်အောင် သိချင်တဲ့စိတ်တွေ အရမ်းပြင်းပြနေတာနဲ့ နီးစပ်ရာရှမ်းပြည် နိုင်ငံရေး သမားတွေထံ သွားရောက်လည်ပတ် စကားစမှီပြောရင်း ကျနော့်ကို၎င်း စာအုပ်တွေဖတ်ဖို့ ညွန်းပေးလိုက်လို့ ရှမ်းပြည် ရဲ့အရေးအရာတွေကို မနှံ့စပ်သည့်တိုင်အောင် အနည်းနှင့်အများဆိုသလို သိလာလိုက်ရလို့ ယခင်၊ယခု၊နှောင် ဖြစ်လတ္တံသော ရှမ်းပြည်၏အရေးအရာတွေကို တတ်သိသလောက် မျိုးဆက်သစ် ရှမ်းပြည်နိုင်ငံရေးသမားတွေကို ဖောက်သည်ချ ဝေမျှချင်တဲ့အတွက် ယခုစာကိုရေးတာပါ။
ရှမ်းပြည်အရေးရာကိစ္စသည် ထိုစာအုပ်များကိုဖတ်ကြည့်ပြီးမှ သိတာထက် ယခင်က ရှမ်းပြည်လူထုအခြေအနေနှင့် ယခုလက်တွေ့ ရှမ်းပြည်ရှိ ကျေးလက်နေလူထုလူနေမှုဘဝများကို နိုင်းယှဉ်သုံးသပ်ကြည့်လျှင် သိနိုင်မည် ဖြစ်သည်။ အထူးသဖြင့် ရှမ်းပြည်ရှိ မျိုးဆက်သစ်လူငယ်များတို့သည် မိမိ၏ပြည်နယ်အရေးကို မိမိတို့ကသာ လုပ် ဆောင်ရမည် ဖြစ်သည့်အတွက် ခေါင်းဆောင်တို့ အတိတ်ကလုပ်ခဲ့သမျှသော ဆိုးမွေကောင်းမွေများနှင့် ရှမ်းပြည်အ ရေးအရာများသည် မပြီးဆုံးသေးသည့်တိုင်အောင် ထိုတာဝန်ကို ဆက်လက်တာဝန်ယူ ထမ်းဆောင်သွားရန်အတွက် ယနေ့ခေတ်ပညာတတ် လူငယ် မျိုးဆက်သစ်များအများအပြား လိုအပ်နေဆဲဖြစ်သည်။
နိုင်ငံရေးသမားတစ်ဦးသည် ရပ်တည်မှုတစ်ခုအတွက် သန္ဒေတည်ရာတွင် ဦးစွာ ယထာဘူတကျရန်လုိုသည်။ Common Sense ရှိသူ ယုတ္တိဗေဒ အရလက်ခံနိုင်သူအတွက် အခြေခံစံနှုန်းကို ရရှိပြီးသူဟု ဆိုနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ အဖြူရောင်သည် သန့်ရှင်းစင်ကြယ်ခြင်း ငြိမ်းချမ်းခြင်းသင်္ကေတဟု အများက လက်ခံထားရာ မိမိကဆန့်ကျင်ဘက် ကိုမြင်လျှင်ခံစားရလျှင် Common Sense မရှိသူဖြစ်၍ သန္ဒေတည်ရာမှားယွင်းပြီဟုဆိုနိုင်သည်။
အမျိုးသားရေးစိတ်ဓါတ်ဖြင့် ယနေ့အဖွဲ့အစည်းအသီးသီးသို့ရောက်ရှိနေကြသော နိုင်ငံရေးသမား၊ လူငယ်မျိုး ဆက်သစ်များအနေဖြင့် လာရာကောင်းဖို့လို့အပ်မည်ဖြစ်ပြီး လာရာကောင်းမှလားရာကောင်းနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ အများ ဝေဖန်မှသိတာထက် မိမိကိုယ်ကိုယ် မိမိသိခြင်းသည် အမြတ်ဆုံးသောသိမှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ ကိုယ်ကပြည်သူအတွက် ဘာတစ်ခုမှလုပ်မပေးနိုင်ရင်တောင် မပြစ်မားမိစေရန်ယနေ့ခေတ်နိုင်ငံရေးသမားတိုင်း သိထားသင့်ဟု ယူဆသည်။
ခေတ်အဆက်ဆက်က ရှမ်းပြည်အရေးအတွက် လှုပ်ရှားခဲ့ကြသော နိုင်ငံရေးသမားများသည် အမျိုးသား တန်းတူရေးနှင့် အဖိနှိပ်ခံဘဝမှလွတ်မြောက်ရေးအတွက်ကိုကိုင်စွဲကာ ရရာနည်းဖြင့် တစ်စိုက်မတ်မတ်လုပ်ဆောင် ခဲ့ခြင်းသာဖြစ်သည်။ သို့ပေမယ့် ယနေ့ ရှမ်းပြည်သို့ရောက်ရှိလှုပ်ရှားနေကြသောအဖွဲ့အစည်းအသီးသီးတို့သည် မိမိ ကိုယ်ကျိုးစီးပွါးကို ရှေ့တန်းတင်ကာ ပြည်သူလူထုတွေအပေါ် ပုံစံအမျိုးမျိုးဖြင့် ဆက်လက်ခေါင်းပုံဖြတ်အမြတ် ထုတ် နေကြသည်ကို မြင်တတ်အောင်ကြည့်မည်ဆိုလျှင် အထူးပြောပြနေစရာမလိုပေ။
ရှေးရှမ်ပြည်နိုင်ငံရေးသမားများပြောခဲ့သည့် ရှမ်းပြည်ဘယ်လဲ၊ ရှမ်းပြည်နှောင် ရေး….စသည့်စသည့်အရေး များသည် ဘယ်နှစ်ခုနှစ်ထိရည်ညွန်းထားသည်ကို မသိရပေမယ့် ၎င်းတို့၏နိုင်ငံရေးခံယူချက်သည် ရှမ်းပြည်နယ်ရှိ ပြည်သူလူထုတွေသည် အခြားပြည်နယ်၊တိုင်းဒေသကြီးအသီးသီးရှိပြည်သူများနည်းတူ သာတူညီမျှအခွင့်အရေးမရမ ခြင်း ထိုစကားလုံးသည် အနာဂါတ်ရှမ်းပြည်အရေးလုပ်ဆောင်မည့် နိုင်ငံရေးသမားများအနေဖြင့် ပြေးမလွတ်နိုင်ပေ မယ့် ပြည်နယ်အရေးအရာကိစ္စကို လူမျိုး၊နေရာဒေသမခွဲခြားပဲစုပေါင်းကြိုးစားလုပ်ဆောင်မှသာ ရှမ်းပြည်နှောင်ရေးအ တွက်ဇာတ်သိမ်းကောင်းမည်ဖြစ်သည်။
ရှမ်းပြည်၏ထူးခြားမှုသည် အခြားပြည်နယ်များနှင့်မတူပဲ လူမျိုးပေါင်းစုံ၊ဘာသာပေါင်းစုံ၊ ယဉ်ကျေးမှုဓလေ့ထုံး စံ ပေါင်းစုံဖြင့်စုဖွဲ့ထားသောပြည်နယ်ကြီးတစ်ခုဖြစ်သလို ပြည်ထောင်စုအတွင်သဏ္ဍာန်လည်းဆောင်ပါသည်။ တော တောင်ရေမြေ၊ရာသီဥတု၊ သဘာဝသယံဇာတလည်းပေါကြွယ်ဝသည်။ ယခင်ကပင် Federation of Shan States ဟုခေါ်ဝေါ်သုံးစွဲခဲ့ဖူးပါသည်။ မြန်မာနိုင်ငံတွင် လက်နက်ကိုင်းအဖွဲ့အစည်းများ အများဆုံးရှိသည့် ပြည်နယ်လည်းဖြစ်သည်။ မြန်မာနိုင်ငံ၏ ပြည်တွင်းရေးဆိုရာတွင် အမှန်တကယ်ရှမ်းပြည်နယ်အရေးမှ တကယ့်ပြည်တွင်းရေးအစစ်အ မှန်ဖြစ် သည်ဟုလည်း မြင်မိပါသည်။
ဆိုခဲ့ပါအဖွဲ့အစည်းအသီးသီးတို့သည် တစ်ချို့ လွတ်လပ်ရေးနှင့်အပြိုင်ပေါ်ပေါက်လာသော အဖွဲ့အစည်းများ ရှိသလို နောင်ပိုင်းမှ အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့်နှင့် ရည်ရွယ်အဖုံဖုံတို့ဖြင့် အဖွဲ့အစည်းများမှိုလိုပေါက် ဖွဲ့စည်းထားခဲ့သော အဖွဲ့အစည်းများမနည်းပေ။ အတိအကျမသိရပေမယ့် စာရင်းအရအောက်ဖော်ပြပါအဖွဲ့အစည်းများသည် ရှမ်းပြည်နိုင်ငံရေးကို ကိုင်လှုပ်နိုင်သောစွမ်းအားရှိသည့် အဖွဲ့အစည်းများဟုဆိုလည်းမမှားပေ ၎င်းတို့မှာ-
၂). ရှမ်းပြည်တပ်မတော်(တောင်ပိုင်း)၊ ရှမ်းပြည်ပြန်လည်ထူထောင်ရေးကောင်စီ
၅). တအင်း(ပလောင်) အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော်
၁၂). ဝအမျိုးသားအဖွဲ့ချုပ် (ဒဗလျူ အဲန်အို)
မည်သို့ပင်ဆိုစေကာမူ ထိုအဖွဲ့အစည်းအသီးသီးတို့၏ မူဝါဒသဘောထား ပေါ်လစီတွေသည် ရှမ်းပြည် ပြည်သူလူထုများသိထားဖို့မဆိုထားဘိ ၎င်းတို့တပ်ဖွဲ့ဝင်အချို့တောင်မှ သိချင်မှသိမည်။ ဘယ်လိုပဲဖြစ်နေပါစေ ကိုယ်စီးတဲ့မြင်းက အထီးလား အမလားဆိုတာထက် ကိုယ်စီးနေတဲ့အကောင်တောင်ဘာကောင်မှန်းမသိတဲ့လူများ ထုနှင့်ဒေးရှိ၏ (အားလုံးကိုမဆိုလို) သိထားသင့်ပါသည်ဟု ယူဆထားကြောင်းဖြစ်သည်။ ထိုအခြေအနေကို ကြည့်မည် ဆိုလျှင် အဖွဲ့အစည်းသည် လူထုအတွက်လား လူထုသည် အဖွဲ့အစည်းအတွက်လားဆိုတာ မေးချင်ပါသည်။
ယနေ့ရှမ်းပြည်နိုင်ငံရေးအခြေအနေသည် ဆရာများလို့ သားသေဆိုသည့် စကားပုံအတိုင်း အဖွဲ့အစည်းသာ များပြီး လူထုအရေးကို မားမားမတ်မတ် တစ်ထပ်တည်းရပ်တည်ပေးမည့်အဖွဲ့အစည်းကောင်းများ လိုအပ်နေဆဲ ဖြစ်သည်ဆိုတာထက် တစ်ချို့ဒေသမှာဆိုလျှင် ကျောင်းစာတွေ သင်ရဖို့ထက် ထမင်းနှပ်မှန်အောင်ပင် နေ့စဉ်နှင့်အမျှ လုံးပမ်းနေကြရသည်လည်း ကျေးရွာသို့ ကွင်းဆင်းရောက်ဖူးသည့် အဖွဲ့အစည်းများသာအသိဆုံးဖြစ်သည်။
အမျိုးသားရေးကိုတစ်လွဲအသုံးချပြီး မိမိကိုယ်ကျိုးစီးပွါး၊ မိသားစုအကျိုးစီးပွါးနှင့် အဖွဲ့အစည်းရပ်တည် နိုင်ရေး အတွက်သာ လှုပ်ရှားမနေကြတော့ပဲ မိမိကိုယ်ကိုယ် ရှမ်းပြည်ကိုယ်စားပြု အဖွဲ့အစည်းများအဖြစ်ခံ ယူနေကြ သော သူများ လူကိုလူလိုမြင်တတ်ပြီး လူထုအခြေပြု အဂ္ဂဗျူဟာများ၊ မဟာဗျူဟာ၊နည်းဗျူဟာကောင်းများကို နေရာ ဒေသ၊ လူမျိုးဘာသာမခွဲခြားဘဲ စုစုစည်းစည်းမိသားစုစိတ်ဓါတ်ဖြင့် ငြိမ်းချမ်းသာယာဝပြောသော အနာဂါတ်ရှမ်း ပြည်ကို ပြန် လည်တည်ဆောက်ရန် ယနေ့အချိန်သည် အခွင့်ကောင်းဖြစ်သည်၏။
သို့မှသာ အနာဂါတ်ရှမ်းပြည်နိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်ကြီးများ၊ ရင့်ကျက်သောမျိုးဆက်သစ်ရှမ်းပြည်လူငယ် နိုင်ငံရေးသမားကောင်းများကို မွေးထုတ်နိုင်မည်ဖြစ်ပြီး ရှမ်းပြည်အတွက်တိုင်းကျိုးပြည်ပြုပုဂ္ဂိုလ်များ များများပေါ်ထွက် လာမည်ဖြစ်သည်။ ရှေ့ကနွားလားဖြောင့်ဖြောင့်သွားက နောက်ကနွားလားဖြောင့် ဖြောင့်လိုက်သည် ဆိုသည့်အတိုင်း ရှမ်းပြည်အရေးကို စေတနာမှန်မှန်ဖြင့် ကြိုးစားလုပ်ဆောင်တတ်သော လူငယ်များလည်း ပေါ်ပေါက်ရန် ထာဝစဉ် မျော်လင့်နေပါကြောင်း။